गर्भावस्थामा पेट चिलाएर हैरान हुनुहुन्छ ? उसोभए सेतो धर्सा आउन नदिन यी उपाय अपनाउनुहोस् ! -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १६, २०७८ समय: २१:४८:३८
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा महिलाहरु लाई चिलाउने गुनासो सामान्य छ। जब गर्भवतीको शरीर बढ्छ, छाला तानिन्छ। जसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा चिलाउने समस्या हुन्छ। छाला चिलाउने र अत्यधिक एक्सपोजरले समस्या निम्त्याउन सक्छ। गर्भावस्थाको समयमा शरीरको कुनै पनि भागमा चिलाउने समस्या हुन सक्छ। यो खुट्टा,पेट, हात, हत्केला आदि मा कहीं पनि हुन सक्छ। शरीरमा अत्याधिक चिलाउने कारणले छाला पनि बिग्रन पनि सक्छ, जहाँ संक्रमणको जोखिम पनि बढ्छ।
आयुर्वेदाचार्य डा वसन्तकुमार सिंह घरेलु उपचारले चिलाउने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन्। यहाँ केही यस्ता घरेलु उपायहरू छन्, जसलाई अपनाएर महिलाहरूले चिलाउने समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छन्। गर्भावस्थाको समयमा, महिलाहरु लाई अक्सर पेट वरिपरि धेरै चिलाउने गर्छ। चिलाउने समस्या यति धेरै हुन्छ कि उनी हातले बारम्बार इन्चिंग भएको भागलाई चिलाउने गर्छिन्। यो समस्याबाट बच्नुपर्छ बच्न नत्र यसले छालामा दागहरू छोड्न सक्छ।
चिलाउने समस्या सामान्य छ:
गर्भावस्थाको अन्तिम ८ र ९ महिनामा कतिपय महिलामा चिलाउने समस्या धेरै बढ्छ भने कतिपयमा यो समस्या हुँदैन । यदि चिलाउने समस्या बढी छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नु ठीक होइन । कहिलेकाहीँ अत्याधिक चिलाउँने समस्या तपाईका साथै गर्भमा रहेको बच्चाको लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ। चिलाउने समस्यलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
चिलाउने समस्या हुन्छ नोक्सान दायक
जब गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा बढ्छ, आकार बढ्न थाल्छ, तब पेटको छाला चिलाउने हुन्छ। यो किनभने बच्चा बढ्दै जाँदा, पेटको छाला खिच्न थाल्छ, जसले छाला सुख्खा हुन थाल्छ। रक्तसञ्चार बढ्दा पनि यो समस्या सुरु हुन्छ । गर्भावस्थाको कोलेस्टेसिस हुँदा, समस्या गम्भीर हुन सक्छ।
यो कलेजोसँग सम्बन्धित समस्या हो, जुन गर्भावस्थाको समयमा धेरै महिलाहरूमा हुन्छ। यो कलेजोको इन्जाइममा गडबडीको कारणले हुन्छ। यसमा पेटसँगै हात र खुट्टामा कडा चिलाउने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ।
नरिवलको तेलले छालाको चिलाउने समस्या हटाउँछ, किनभने यसमा फ्याटी एसिड हुन्छ। चिलाउने ठाउँमा नरिवलको तेल दिनमा दुईदेखि तीन पटक लगाउनुहोस्। नुहाएपछि पनि यो तेल लगाउनुस् ।
एलोवेरा जेल पनि गर्भावस्थामा चिलाउने समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि प्राकृतिक उपचार हो। यसको जेलले छालालाई शीतलता प्रदान गर्छ। यसलाई लगाउने गर्नाले तपाई स्ट्रेच मार्क्सबाट पनि बच्नुहुनेछ। जहाँ चिलाउने समस्या छ, त्यहाँ जेल लगाएर एक घण्टाको लागि छोड्नुहोस् र राती सुत्ने र बिहान जुन बेला तपाईलाई नुहाउन सम्भव हुन्छ त्यती बेला नुहाउनुहोस् ।
पेट्रोलियम जेलले पनि चिलाउने समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि मदत गर्दछ । यसलाई महिलाले सजिलै लागु गर्न सक्छन् । यसमा कुनै पनि केमिकल हुँदैन जसले तपाईलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। यो धेरै सुखदायक र लाभदायक हुन्छ, जसलाई लागू गर्नाले खुजलीबाट मात्र राहत प्रदान मात्र गर्दैन तपाईंको छालालाई नरम राख्छ।
चिलाउने समस्याबाट छुटकारा पाउन गर्भवती महिलाले लगाउने तेलमा केही थोपा कागतीको रस हालेर शरीरमा चिलाउने ठाउँमा लगाउनुहोस्। यसले तपाईंलाई चिलाउने समस्याबाट राहत दिन्छ। कागती चिलाउने समस्यको लागी एक धेरै प्रभावकारी उपचार हो।
चिलाउने ठाउँमा तुलसीको पात वा रस लगाउनाले आराम मिल्छ । तुलसीमा थाइमोल, एजेनोल, युजेनोल र कपूर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । जसका कारण चिलाउने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । महिलाले नुहाउने पानीमा तुलसीको रस मिसाएर नुहाउँदा आराम मिल्छ।
तुलसीको रस निकालेपछि जहाँ चिलाउने समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई कपासको सहायताले शरीरमा लगाउनुहोस् । जसले गर्दा चिलाउनेबाट राहत मिल्छ।
गर्भवती महिलाले कपासमा एप्पल साइडर भिनेगर भिजाएर चिलाउने ठाउँमा लगाउनाले चिलाउने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
बेसार र र्सस्युको तेलको लेप
गर्भवती महिलाहरूले चिलाउने ठाउँमा यो पेस्ट लगाउनु पर्छ। किनभने बेसार एन्टिसेप्टिक र एन्टिबायोटिकका लागि उत्तम मानिन्छ र तोरीको तेलमा संक्रमण हटाउने शक्ति बढी हुन्छ। यसको प्रयोगले चिलाउने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।